Zakariye Ismaaciil Xirsi “Waxaan cadeynayaa inaan ka baxay Alshabaab, Nabadna aan qaatay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Zakariye Ismaaciil Xirsi oo horay u ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Alshabaab, islamarkaana dowladda Soomaaliya isu dhiibay bartimihii bishaan Jaanyo, loona wareejiyey Muqdisho ayaa shir jaraa’id ku qabtay caasimadda Soomaaliya.
Zakariye Ismaaciil oo ahaan jiray madaxa Amniyaadka Alshabaab ayaa ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay Shabaabnimadii uu muddo ku jiray.
Wuxuu sheegay Zakariye Ismaaciil inuu ka baxay Alshabaab, islamarkaana wixii maanta ka dambeeya uu wax kasta ku raadin doono qaab nabadeed, uuna tanaasulay dagaal.
Sarkaalkan ka tirsanaan jiray Alshabaab ayaa sheegay in la marin habaabiyey qorshihii Alshabaab, islarkaanka sida uu yiri koox yar oo ka tirsan hogaanka ururkaas ay ku tacdiyeen dhiga dadka Muslimiinta ah.
“Anigoo ah Zakriya Ismaaciil Xirsi – Zaki ku magac dheer. Maanta oo ay taariikhdu tahay 27 Jan 2015 (Talaado), Sidaad la socotaanba waxaan ahaan jiray xubin ka tirsan ururka Alshabaab oo aan masuuliyado kale duwan oo aan ka soo qabtay hogaanka sare ee ururka. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arimo dhawr ah oo in muddo ah soo jiitamayay, oo uu Ilaahay (Caza Wa Jalla) maanta na waafajiyay” ayuu yiri Zakariye Ismaaciil.
“Hadaan dib ugu noqdo ujeedooyinkii hore ee ururku ku bilowday, oo ahaa kuwo dad badan oo niyad wanaagsan soo jiidan karay. Laakiin nasiib darro, waxaa dhacday in laga leexday ujeedooyinkaas oo ay majarahabaabiyeen shaqsiyaad watay dano gaar ah oo gurracan, faragalin iyo aragti shisheeyana aysan ka marnayn” ayuu sidoo kale yiri Zakariye oo warbaahinta kula hadlay xarrunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
“Xaaladu waxay ku danbaysay in:- in laga beensheego ku dhaqankii shareecada laguna dhacay xadgudub diineed, Midnamadii iyo wada tashigii ururka oo meesha ka baxay, Xariirkii bulshada oo xumaaday loona turi waayay, Dulmi iyo xadgudub badan oo loo gaystay bulshada iyo dad badan oo ururka ka tirsanaaba, In Jihaadkii la marin habaabiyay, loona rogay mid shacabkii lagu beegsado dhiigga muslimkana lagu xalaashaday. Waxaa xaqiiqa ah in fikirkaas qaloocan uu ku koobanyahay rag fara kutiris ah oo hogaanka ururka kamid ah, waxaana jira dad badan oo an qabin arinkaas kuna qanacsanayn sida wax u socdaan” ayuu yiri Zakariye.
Zakariye oo sii hadlaya ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay Alshabaab, wuxuuna yiri “Haddaba waxaan cadaynaayaa maanta wixii ka danbeeya in aan xubin ka ahayn Ururka Al-shabaab, mabaadiidayda iyo fikirkayga aan ku gudbisan doono qaab nabadeed iyo isfaham; oo aan ka tanaasulay inaan dagaal iyo colaad wax ku xaliyo”
Zakariye ayaa baaq u diray ragga asxaabtiisa ahaa ee ku haray Alshabaab, wuxuuna yiri “Waxaan ugu baaqayaa kuna dhiiri galinayaa ragga saaxibaday ah in si wadahadal iyo nabadgalyo ah wax lagau xaliyo maadaama uu ururkii ku yimid burbur iyo kala tag, anigana halkan waxaan u imid sidii aan arinkaa ooga howl gali lahaa”.
“Ugu danbayn, waxaan u mahadcelinaayaa dawladda soomaaliyeed sida qadarinta iyo xushmada mudan ee ay noo soo dhaweeysay. Waxaa an aad ugu faraxsanahay in manta ay jirto Dawlad Somaliyeed oo sharciya oo danaynaysa xuquuqda dhamaan bulshada Somaliyeed. Waxaan halkan ka cadaynayaa in aan waxba ka jirin aragtida ay dadbadan oo ururka ka mid ahi aaminsan yihiin in dawladu ku xadgudubto xuquuqda muwaadinka, iyo in loo gacangeliyo gacan shisheeye” ayuu hadlkiisa Zakariye kusoo gebagebeeyey.
Sii hayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa sheegay in dowladda federaalka ah soo dhaweyneyso go’aanka uu Zakariye uga tanaasulay fikirkii Alshabaab.
Sarkaalkaan oo ay is khilaafeen hogaamiyihii la dilay ee Alshabaab Abuu Zubeyr, islamarkaana muddo dhuumaaleysi ahaa ayaa baratimihii Janaayo isu dhiibay ciidamada Soomaaliya ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Zakariye ayaa Dowladda Mareykanku waxey Sanadkii 2012 Madaxiisa Duldhigtay Lacag gaareeysa $3Milyan oo Dollar.